HomeWararka CiyaarahaWar Xiiso Leh: Ole Gunnar Solskjaer oo loo Qabtay Saddex Kulan si uu Shaqadiisa u Badbaadiyo
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa kaliya seddex kulan u haray si uu u badbaadiyo shaqadiisa garoonka, sida lagu sheegay warbixinta ugu Danbeysay.
Norwegian-ka ayaa halis ugu jiray ceyrinta ka dib markii Axadii lagu bahdishay Liverpool 5-0 ka hor inta aysan madaxda United go’aansanin in la Ceyriyo hadii Xaalka sida uu ku socdo.
Si kastaba ha noqotee, Solskjaer ayaa weli saaran cadaadis weyn ka dib markii uu kooxdiisa ku hogaamiyay hal dhibic kaliya afartii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League, usbuuca soo socda ayaa la filayaa inuu sameeyo ama lumiyo waqtigiisa tababaraha Man United.
Sida laga soo xigtay The Mirror , Solskjaer ayaa ‘si weyn loo filayaa’ in la ceyriyo haddii Man United laga badiyo seddexda kulan ee soo socota ee Tottenham Hotspur, Atalanta BC iyo Manchester City.
Warbixintu waxay intaa ku dartay in Ed Woodward iyo Richard Arnold ay wali kalsooni ku qabaan hababka Solskjaer, laakiin waxaa jira habacsanaan’ kooxda Man United oo ku saabsan taatikada 48-jirka.
Antonio Conte , Zinedine Zidane iyo Erik ten Hag ayaa dhamaantood loo malaynayaa inay yihiin musharixiin si ay ula wareegaan shaqada Man United hadii Solskjaer uu baxo mustaqbalka dhow.